बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजुको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू लेख्नुहोस्
Published On : 30 January, 2020 11:52 am
स्वच्छ सुनुवाई (Fair Trail) “Everyone is entitled in full equality toafair and public hearing”. अवधारणा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रह रहित रुपमा सम्पादन गर्न आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा
Published On : 29 January, 2020 1:10 pm
कर्मचारीततन्त्रउपर लागेका मूलभूत आरोपहरु के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कर्मचारीततन्त्रउपर लागेका मूलभूत आरोपहरु के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । कर्मचारीतन्त्र स्थायी र कानुनी संयन्त्रका रुपमा अवलम्वन गरिएको भएतापनि यसउपर विभिन्न आरोपहरु लगाई विकल्पहरु समेत सुझाइएको पाइन्छ । प्रमुखरुपमा
Published On : 29 January, 2020 11:51 am
बाह्य पदपूर्ति भनेको के हो ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस् ?
१) बाह्य पदपूर्ति भनेको के हो ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस्  । सेवाभित्रका कार्यरत कर्मचारी वा सेवाबाहिरका तर तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर रिक्त
Published On : 28 January, 2020 12:59 pm
लोक सेवा विशेष : सम्भावित ११ विषयगत प्रश्नोत्तर, छोटकरीमा !
१) दिगो विकास भनेको के हो ?भविष्‍यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास हो । दिगो विकासका मुख्यतया दुई सिद्धान्तहरू छन्; १) आधारभूत आवश्यकताको
Published On : 27 January, 2020 12:31 pm
लोक सेवा सम्भावित १० विषयगत प्रश्नोत्तरहरु, छोटकरीमा !
१) राजनैतिक विभाजनका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । विकास निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउने विकेन्द्रीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने जनताको पहुँचमा सेवा सुविधा पुर्‍याउने राज्यका हरेक क्षेत्रमा समता मूलक पहुँच पुर्‍याउने क्षेत्रीय सन्तुलन कायम
Published On : 27 January, 2020 11:48 am
निजामती सेवा भनेको के हो ? र यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ?
प्रश्न : निजामती सेवा भनेको के हो ? र यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ? लेख्नुहोस् । नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा
Published On : 26 January, 2020 1:09 pm
KYC भनेको के हो ? KYC मा भर्नुपर्ने विवरणहरु के के हुन् ?
KYC भनेको के हो ? KYC मा भर्नुपर्ने विवरणहरु के के हुन् लेख्नुहोस । कम्पनीले आफ्नो ग्राहकको पहिचान थाहा पाउने प्रक्रियालाई केवाईसी (KYC) अर्थात नो योर कस्टुमर (Know your costumer)